March 5, 2018 – Thutastar
ရွာလုံးကျွတ်နီးပါး မီးလောင်သွားသော ရေစကြိုမြို့နယ် သစ်ကြီးတောရွာသို့ ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်းရောက်ရှိ
Comments Off on ရွာလုံးကျွတ်နီးပါး မီးလောင်သွားသော ရေစကြိုမြို့နယ် သစ်ကြီးတောရွာသို့ ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်းရောက်ရှိ
လတ်တလော ရွာလုံးကျွတ်နီးပါး မီးလောင်သွားသော ရေစကြိုမြို့နယ် သစ်ကြီးတောရွာသို့ ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်းရောက်ရှိ လေးစားပါတယ် ပရဟိတမင်းသားကြီး။ ဒါကြောင့်လည်း ပြည်သူအများရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ခိုင်ခိုင်မာမာရရှိထားတာပါ။ တောင်ပေါ်မှာ အခက်အခဲဖြစ်နေလား။ ဝေဠုကျော် ရောက်အောင်သွားတယ်… တောင်အောက်လား…. မြေပြန့်လား… နယ်စပ်လား… စစ်ပွဲတွေကြားလား…မရောက်ရောက်အောင် သွားတတ်တဲ့ ဝေဠုကျော် နှင့် အဖွဲ့ကို ဂုဏ်ယူလေးစားလျှက်ပါ။ ကိုဝေဠုကျာ် ရေစကြိုမြို့ သစ်ကြီးတောရွာကို ကူညီနေပြီး အမျိုးတွေ.. သစ်ကြီးတောကျေးရွာရေစကြိုမြို့နယ်ကိုလူုဖို့လာတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားကိုဝေဠုကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ရီမောင်အဖွဲ့သားများမှလိုက်ပါလမ်းပြပို့ဆောင်ကူညီပေးလိုက်ပါတယ်ကိုဝေဠုကျော်မှမီးဘေးသင့်ကျေးရွာအတွက်အလူငွေ ၂၅ သိန်း ၁၀ တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားမျာူအတွက်တစ်ဦးချင်းအလူုငွေနှင့်ဆရာဆရာမများအတွက်လဲအလူုငွေများလူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။.. နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လဲလိုအပ်သည်များလူုပေးပါအုံးမည်ဟုပြောကြားသွားပါတယ်အပြန်မှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့အမှတ်တရဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးကြပါတယ်။.. ရေစကြိုမြို့နယ်သစ်ကြီးတောရွာမီးဘေးအတွက်မည်သူကိုမဆိုမည်သည့်အသင်းအဖွဲ့ကိုမဆိုလိုက်ပါပို့ဆောင်လမ်းပြကူညီပေးပါမည်။.. ကယ်ရီမောင်အသင်း ၀၉၄၅၀၅၂၈၁၅၆ ၀၉၇၇၈၉၉၆၇၅၄.. သတိုး သတိုးအောင် , Photo – Credit to original uploader
Comments Off on အိမ်နီးနားက လေဖြတ်လို့ အကြောဆွဲနေသူ လမ်းမလျှောက်နိုင်သူများကိုပြောပေးဖို့
လွန်ခဲ့တဲ့ ၉နှစ်လောက်က နက္ခတ္တရောင်ခြည် မဂ္ဂဇင်း စာအုပ်ကို လစဉ် ထွက်တာနဲ့ ဝယ်ပြီးဖတ်တယ် ။ အဲ့ဒီထဲမှာက ဗဟုသုတ မှတ်သားဖွယ်ရာတွေ အကိုးကားနဲ့ ပါလေ့ရှိတယ် ။ မှတ်ထားမိတာလေး ပြန်လည်မျှဝေတာပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း သောက်သုံးဖူးတယ်။ အရသာကတော့ တော်တော် ခါးပါတယ်။ လိပ်စာ အတိကျတော့မမှတ်မိတော့ပါဘူး မုံရွာနယ်က ကျေးရွာ တစ်ရွာက တောကျောင်း ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ ဆေးနည်လေးပါ ဖြစ်စဉ်ကတော့ မုံရွာ-မန္တလေး ကားမောင်းသမား တယောက်ဟာ နေဒဓူဝ ကားမောင်းရတဲ့ အဖြစ်ကနေ ကိုယ်တစ်ချမ်း သေပြီး လေဖြတ်တယ်ဆိုပါတော့ ။ ဆေးရုံ ဆေးခန်း ပေါင်းများစွာ ဆေးကုပေါ့ သို့သော်လည်း အကောင်းတိုင်ပြန်မဖြစ်တော့ပါဘူး ။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ယောက်စကား တယောက်နား ဆိုသလို ထိုဘုန်းတော်ကြီး ရှိတဲ့ တောကျောင်းကို
Comments Off on မန္တ​လေးက..အက်​စစ်​နှင့်​လောင်းတဲ့.အမျိုးသမီး​တွေကို..သိခြင်​သူများ..ကြည့်​ပါ..လာပါပြီဗျာ..
မန္တ​လေးက..အက်​စစ်​နှင့်​လောင်းတဲ့.အမျိုးသမီး​တွေကို..သိခြင်​သူများ..ကြည့်​ပါ..လာပါပြီဗျာ.. အိမ်အကူကို မိန်းက​လေးအား အက်ဆစ်ဖြင့်လောင်းခြင်း၊ မျက်စိကွယ်အောင် နှိပ်​စက်​ခဲ့သည့်​ အမျိုးသမီးကို အရေးယူ မန္တလေး၊ မတ် ၄ မန္တလေး ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မြရည်နန္ဒာရပ်ကွက်အတွင်းရှိ နေအိမ်တစ်ခုအတွင်း အိမ်အကူအဖြစ် အလုပ်ကိုင်သည့် အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးကို အက်ဆစ်ဖြင့်လောင်းခြင်း၊ မျက်စိကွယ်အောင် လုပ်ခြင်းတို့ လုပ်ခဲ့သည့်အမျိုးသမီးအား မတ်လ ၁ ရက်နေ့က အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးအရေးယူထားကြောင်း လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နှင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲ (မန္တလေး) က သိရသည်။ အက်စစ်နှင့် အပတ်ခံရသည့် မိန်းကလေးမှာ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ရွာငံမြို့နယ် နဘမ်းကြီးကျေးရွာတွင်နေထိုင်သည့် မနန်းမေဇင်ဦးဖြစ်ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကတည်းက အက်ဆစ်ဖြင့် လောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မတ်လ (၁) နေ့က ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာကြောင်း သိရသည် ။ “ထွက်ပြေးလာတဲ့ အိမ်အကူက အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နဲ့ ချိတ်မိပြီး ကျွန်တော်တို့ လူကုန်ကူးအဖွဲ့မှာ
Comments Off on ချစ်တင်းနှောရန် စိတ်လှုပ်ရှားအကောင်းဆုံးနေရာများ
အိပ်ရာထဲမှာ ပုံမှန်အတိုင်းချစ်တင်းနှောတာက ရှေးရိုးစွဲဆန်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အိပ်ရာထဲမှာပဲ ချစ်တင်းနှောဖူးတယ်ဆိုရင် တကယ်လန်းပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ ချစ်တင်းနှောမှုမျိုးတွေကို မကြုံဖူးသေးဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အရာနှစ်ခုက လိင်ကိစ္စနဲ့ စွန့်စားမှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုလုံးကို ပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် သင့်ဘ၀မှာ အကောင်းဆုံး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကို ရရှိနိုင်မှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ချစ်တင်းနှောဖို့အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ နေရာတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အခွင့်အရေးရရင် ကြိုးစားကြည်ပါ။ ၁။ ကားထဲမှာ ဟုတ်ပါတယ်။ ကားနောက်ခန်းထိုင်ခုံက အိပ်ရာလောက်တော့ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စွန့်စွန့်စားစားလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကားထဲမှာ ကြိုးစားကြည့်သင့်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေကလည်း အိပ်ရာထဲထိရောက်အောင် မစောင့်နိုင်ပဲ စွန့်စားကြည့်ချင်တဲ့ လူမျိုးတွေကို ပိုသဘောကျတတ်ပါတယ်။ ၂။ အိမ်အပြင်ဖက်မှာ သင့်အိမ်ခြံဝန်းအတွင်းမှာ၊ ၀ရံတာမှာ၊ လျှောက်လမ်းမှာ စသဖြင့် အိမ်ထဲမဟုတ်တဲ့ ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ပါ။
Comments Off on KTV ဆိုင်မှ အဆိုရှင်မိန်းကလေး ခေါ်ရာနောက် လိုက်သွားသည့် ကိုရီးယားနိုင်ငံသား၏ ဒေါ်လာများ အခိုးခံရ
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ကိုးမိုင်အနီးရှိ KTV ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် သီချင်းအတူဆိုခဲ့သည့် ယင်းဆိုင်မှ အမျိုးသမီး၏ ခေါ်ရာနောက်သို့ လိုက်သွားသော အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ် ကိုရီးယားနိုင်ငံသား အမျိုးသားတစ်ဦး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၅၀၀ နှင့် ကျပ် ၁၀ သိန်းတန်ဖိုးရှိ လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံး ခိုးယူခံရကြောင်း အမှုဖွင့်တိုင်ချက်အရ ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရသည်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာများ အခိုးခံရသည့် ကိုရီးယားနိုင်ငံသား Mr. Kim Wonchul မှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက် ည ၁၀ နာရီက ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတစ်ဦးနှင့် အတူ ကိုးမိုင်အနီးရှိ KTV ဆိုင်သို့ သွားခဲ့ပြီး ယင်းဆိုင်မှ အဆိုရှင် မမြင့်မိုရ် (စုံစမ်းဆဲ) နှင့်အတူ သီချင်းသီဆို၍ သောက်စားခဲ့ပြီး ည ၁၂ နာရီတွင် မမြင့်မိုရ် က
ပရဟိတကားသမားနှင့် ဆိုင်ကယ်တိုက်မိ ဆိုင်ကယ်သမား ပွဲချင်းပြီး သေဆုံး
Comments Off on ပရဟိတကားသမားနှင့် ဆိုင်ကယ်တိုက်မိ ဆိုင်ကယ်သမား ပွဲချင်းပြီး သေဆုံး
ရှောင်တိမ်းမရလို့ဖြစ်မိတာစိတ်မကောင်းပါဘူး ကုသိုလ်ရေးလုပ်ရင်းမတော်တဆဖြစ်ရတော့ပိုစိတ်မကောင်းပါဘူး ” လူတွေကိုကူညီခဲ့တဲ့ ပရဟိတသမားတစ်ယောက် ဒုက္ခရောက်ရင် ကူညီမဲ့သူ မရှိတော့ဘူးလားဗျာ ” ပခုက္ကူမြို့ရဲ့ ပရဟိတစွမ်းဆောင်ရည် ဆုရတဲ့ သူတစ်ယောက် ဒီနေ့ လူနာပို့သွားရင်း ဆိုင်ကယ်နဲ့ကား တိုက်မိပြီး ဆိုင်ကယ်သမား ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားလို့ အခုတော့ မြင်းခြံအချူပ်ထဲ ရောက်နေလေရဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာ ကျွန်တော့အသင်းက အားထားခဲ့ရတဲ့ ပရဟိတဆုတံဆိပ်ရှင် မောင်အောင်မိုးထွန်း ဟာ သဟာယအသင်းကားနဲ့ မန္တ​လေးကိုလူနာပို့သွားရင်း မြင်းခြံအထွက်နားက ရွာတစ်ရွာမှာရှေ့မှာ လိုက်ထရပ်ကားနဲ့တိုက်မိပြီး လွင့်စဉ်ထွက်လာတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို တက်နင်းမိပြီး (လူကိုမနင်းမိဟုပြော) အမူဖြစ်လို့ ယနေ့ အခင်းဖြစ်ရက်စွဲ (4.3.2018) ရက်နေ့မှာ မြင်းခြံအချူပ်ထဲရောက်နေပါပြီ ပရဟိတစိတ် အပြည့်ရှိသလို အသင်းသားတိုင်း ချစ်ခင်ကြပြီး စာနာစိတ်အပြည့်ရှိတဲ့ ကျွန်တော့ ညီငယ်လေး မောင်အောင်မိုးထွန်းဟာ ပရဟိတဆုတောင် ရရှိခဲ့တဲ့
Comments Off on လူသတ်ပြီး ကားလုယက်မှု ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ ၁ ဦးနဲ့ တရုတ် ၁ ဦးကို ဝ တပ်ဖွဲ့ သေဒဏ် အပြစ်ပေး
ဝ ဒေသ မိုင်းမော ခရိုင်အတွင်း လူသတ်ပြီး ကားလုယက်မှု ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁ ဦးနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား ၁ ဦးတို့ကို ဝ ဒေသကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ ဝ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်ဖွဲ့က မတ်လ ၄ ရက်နေ့က သေဒဏ် အပြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနစ် သြဂုတ်လအတွင်းက မိုင်းမောခရိုင် လုံထန်မြို့နယ်အတွင်းမှာ ပန်ဆန်းကနေ မိုင်းမောကို ငှားရမ်းလာတဲ့ ကားတစီးပေါ် ပါလာတဲ့ ကားပိုင်ရှင် ဇနီးမောင်နှံကို ကားငှားလာသူ အမျိုးသား ၂ ဦးက သတ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ကျူးလွန်သူ အမျိုးသား နှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ဝ တရားရေးဌာနဘက်က သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာလို့ ဝ တပ်ဖွဲ့ရဲ့ လားရှိုးဆက်ဆံရေးရုံးတာဝန်ခံ ဦးညီရမ်းက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
လိင်ကိစ္စ အထွတ်အထိပ်ရောက်ခြင်းထက် ပိုကောင်းတာဟာ တစ်မိနစ်ကြာအောင် ရောက်နေတာပါပဲ။ ပုံမှန် ပြီးဆုံးခြင်းတွေဟာ ၆ စက္ကန့်ကနေ စက္ကန့် ၃၀ ပဲ ကြာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ လှူပ်ရှားမှုတွေနဲ့ သူမရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တို့ ကူညီပေးရင်တော့ ၁ မိနစ်ကြာအောင် ပြီးဆုံးခြင်းကို ပေးထားနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ သူမကို ၁ မိနစ် ပြီးဆုံးခြင်း ပေးထားဖို့ အောက်က မဟာဗျူဟာ ၆ ခုကို လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။ ၁. သင့်အခန်းကို ဟိုတယ်အခန်းလို ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ အမျိုးသမီးတွေ ပြီးဆုံးခြင်းရောက်ဖို့ သော့ချက်ကတော့ သက်တောင့်သက်သာရှိနေပြီး အရသာခံဖို့ကိုပဲ အာရုံစိုက်နေဖို့ပါ။ အဲဒါကြောင့် သူမရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ပြင်ပါ။ သူမ အလုပ်မှာ စိတ်ပင်ပန်းလာရင် သူမနောက်ကျောလေးကို နှိပ်ပေးပါ။ ဖုန်းတွေပိတ်၊ တံခါးတွေ
Comments Off on ပေါက်တောမြို့တွင် ဆယ်တန်းဖြေမည့် ကျောင်းသားတစ်ဦး ဓါးထိုးခံရ၍ သေဆုံး
ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တောမြို့တွင် ဆွေမျိုးချင်း ရန်စရှိရာမှ ဦးလေးတော်စပ်သူ တစ်ဦးက ဓါးဖြင့်ထိုးသဖြင့် အသက် (၁၆) နှစ်အရွယ် ဆယ်ကျောင်းသား တူဖြစ်သူမှာ သေဆုံးသွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ပေါက်တောမြို့နယ်ရဲစခန်းသို့ နိရဉ္စရာမှ ဆက်သွယ်ရာ မြို့နယ်ရဲမှူးက “ မူခင်းဖြစ်ပွားတာ မှန်ပါတယ်။ ဒီလ ၃ ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီခန့်မှာ ဖြစ်ပွားတာပါ။ ဆွေမျိုးအချင်းချင်း ဖြစ်ကြတာပါ” ဟု ပြောကြားသည်။ သေဆုံးသူမှာ ပေါက်တောမြို့ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက် ကျောင်းဆရာ ဦးသန်းမောင်( သပြေကန် အထက)၏ သားဖြစ်သူ ဇင်ကို (ခေါ်) မောင်တင့်ဇော်ထူး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဇင်ကိုအား ဓါးဖြင့်ထိုးသူမှာ ဦးလေးတော်စပ်သူ ကျော်ဇောရီ (၄၂) ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုအချိန်ထိ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေကြောင်း၊ ကျော်ဇောရီမှာ
FDA ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးအား အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည့် လက္ခဏာ မတွေ့ခဲ့ရဟုရှ့နေ ဦးမောင်မောင်စိုးပြော
Comments Off on FDA ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးအား အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည့် လက္ခဏာ မတွေ့ခဲ့ရဟုရှ့နေ ဦးမောင်မောင်စိုးပြော
တရားခံမျိုးဇော်ဦး(ခ)ဆီဒိုးနားသည် FDA ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးထံမှ ပစ္စည်းများကို လုယက်၍ သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်မှာ မှန်သော်လည်း ဆေးစစ်ချက်အရ အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည့် လက္ခဏာ မတွေ့ရကြောင်း တရားခံဘက်မှ ရှေ့နေ ဦးမောင်မောင်စိုးက ပြောသည်။FDA ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးအား အဓမ္မပြုကျင့်၊ လုယက် သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မတ်လ ၅ ရက်က ၃ ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းအဖြစ် အရှေ့ပိုင်းခရိုင် တရားရုံး၌ တရားခံမျိုးဇော်ဦး(ခ)ဆီဒိုးနားအား ရုံးထုတ် စစ်ဆေးရာတွင် ယခုကဲ့သို့ ပြောခြင်း ဖြစ်သည်။ “ အခုချိန်မှာ မုဒိမ်းမှုတွေကများပြားပြီးတော့ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုလည်း ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုမှု တွေက များပြားနေတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တရားခံမုဒိမ်းမှုကျူးလွန်သူဘက်ကနေ ပြန်လိုက်ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေ ကျတော့ ကိုယ့်အမှုသည်ကိုဥပဒေဘက်ကနေအစွမ်းကုန် ကြိုးစားပြီးကာကွယ်ရမှာပဲ။ အခုစစ်ဆေးချက်အရ တရားခံမျိုးဇော်ဦးဟာ လူသတ်လုယက်တာတော့မှန်တယ်။ ဒါပေမဲ့